Samsung Galaxy S7 sy S7 Edge dia manaraka ny tsipika amin'ny famolavolana ny S6 | Androidsis
rehefa ny fotoana tsy azo lavina miaraka amin'ny LG G5, amin'ny maha finday finday modular voalohany an'ny mpamokatra Koreana dia nanantona avy hatrany izahay ny fahatongavan'i Galaxy S7. Hetsika iray an'ny Samsung izay ny telefaona mihitsy no mpandray anjara fototra ary niseho ny fanehoan-kevitra momba ny mety hisian'ny zava-misy virtoaly amin'ny alàlan'ity finday ity i Mark Zuckerberg.
Ny Galaxy S7 vaovao dia aseho ho mahia, kely kokoa ary miaraka tsipika mitohy amin'ny endrika tsy misy tsy ampoizina lehibe ankoatr'izay voalaza momba ny zoro. Efijery 5,1 santimetatra ho an'ny S6 sy 5,5 santimetatra ho an'ny sisin'ny S6 miaraka amin'ny fiasa "Hatrany Mandrakizay" hita ao amin'ny LG G5 ary izany dia ho fironana hafa ho an'ny terminal hafa izay hanaraka ireo marika Koreana roa. Ny fanoherana ao anaty rano dia teboka iray hafa izay nanamafisan'izy ireo tamin'ny minitra voalohan'ny fampisehoana nataon'izy ireo. Ho hitantsika indray ny slot microSD ao amin'ny Galaxy S momba izay nasehon'i Samsung ho zavatra mbola tsy re akory rehefa fanao amin'ny ankamaroan'ny telefaona. Ny iray amin'ireo antsipiriany lehibe indrindra amin'ity finday ity dia ny fakan-tsariny manokana misy aperture f / 1.07 izay hanaraka izay hita ao amin'ny S6.
1 S7 izay manaraka ny S6 amin'ny famolavolana
2 Ao amin'ny tsinay
S7 izay manaraka ny S6 amin'ny famolavolana
Samsung dia nifantoka tamin'ny fakan-tsary sasany, Atsimbadika ny slot microSD ary ny fanoherana ny rano ho an'ny Galaxy S7 izay manaraka ny tsipika mitovy amin'ny fiteny famolavolana toy ny S6. Heverinay fa tsy maintsy miandry ny Galaxy S8 isika vao hahita fomba vaovao hafa mivoatra, satria io no iray amin'ireo lesoka lehibe nataon'ity mpanamboatra ity.
Anisan'ireo roa-polo minitra voalohany nifantoka tamin'ny fakantsary Galaxy S7 Miaraka amin'ny toetra mampiavaka azy, na dia ny mampitaha ny kalitaon'ny solomaso amin'ny an'ny iPhone 6s aza.
Ny fahombiazana no zavatra manaraka noresahina a manonona manokana ny fivoaran'ny andiany Galaxy S hamita ny resaka 64,9% fanatsarana ny sary tamin'ny Galaxy S6 teo aloha. Ny tsy nofaritan'izy ireo dia hoe vokatry ny Snapdragon 820 na ny tranony manokana. Manome hevitra momba ny halehiben'ny sary S7 anao, ny bateria dia manaraka amin'ny 3.000 mAh ary 3.600 mAh ho an'ny sisin'ny S7 sy S7.
Un terminal manokana ho an'ny mpilalao toy ny nantitranterina tamin'ny fotoana maro ary amin'ny vanim-potoana iray manontolo an'ny Game of Thrones dia azo lalaovina miaraka amina fiampangana tokana. Io dia amin'ny fotoana filalaovana izay manasongadinan'ny Samsung ny endri-javatra sasany toy ny fandraketana ny lalao, ny fakana am-bava na ampanginana ny fampandrenesana ankoatry ny tombony hafa.
Tim Sweeney, CEO mpanorina ny lalao Epic, dia nivoaka mihitsy aza maneho fahaiza-milalao ho an'ny S7. Aloka mavitrika, rafitry ny fizika zavatra ary toetra maro hafa izay avelan'ity telefaona vaovao ity ary amin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana iray misy lalao iray manokana dia hita ny fahaizany ara-teknika tamin'io hetsika io. Fifanarahana nifanaovan'ny Epic sy Samsung izay hiteraka traikefa vaovao amin'ny lalao video toa ny voalazan'i Sweeney teo imason'ny besinimaro ankehitriny.
Samsung Pay dia iray amin'ireo filokana lehibe indrindra an'ny mpanamboatra Koreana amin'ity taona ity ary hampiasa ny sisin'ny Galaxy S7 sy S7 izy io hanatrarany ireo mpampiasa azy amin'ny firenena vaovao, toa ny antsika, izay misy azy io.
Ankoatra ny Epic dia manana izy fifanarahana amin'ireo marika manan-danja amin'ny sokajy rehetra ao anatin'ny tontolon'ny videogames toy ny Blizzard, EA Games, Gameloft, Glu, SEGA, LEGO, KING, Twitch na Unity.
Araho ny Connect Auto, ny filokana ho an'ny fiara ary araho ny Android Auto toa an'i Apple. Eto izahay dia manao fifanarahana amin'ireo orinasa samy hafa loko sy karazana mba hanohizana ny fampidirana ny serivisin'izy ireo miaraka amin'ny tolotr'ilay orinasa Koreana manokana.
Ao amin'ny tsinay
Es ao amin'ny fitaovana izay ahitantsika ny sandany lehibe amin'ity telefaona Samsung vaovao ity izay manaraka ny torolàlana narahin'ny S6 teo aloha. Ny chip Qualcomm Snapdragon 820 dia mampiseho ny endriny lehibe hanatontosana ny fahaizany feno sy ny fahombiazan'ny angovo. Hamafiso ny fitomboan'ny fahaizan'ny sary, ary izany, araka ny nolazaiko, dia hanamarika fotoana lehibe amin'ny filalaovana izany.
Miaraka ireo telefaona roa Fahatsiarovana RAM 4 GB, 32/64 GB fitehirizana anatiny sy fakan-tsary 12 MP «Dual Pixel» aoriana misy f / 1.7 aperture. Ny efijery dia manomboka amin'ny 5,1 santimetatra an'ny S7 ka hatramin'ny 5,5 santimetatra amin'ny sisiny. Miaraka amin'izany, ny fahasamihafana eo amin'ny habeny dia voamarika amin'ireo fantsona roa ary eo amorony dia mahatratra izay mahazatra ny naoty. Vahaolana HD Quad sy takelaka Super AMOLED izay tsy diso anjara amin'ilay fanendrena.
Ny fakantsary dia mandray ampahany lehibe amin'ity finday ity fanatsarana lehibe eo amin'ny fampisehoana amin'ny toe-jiro ambany. Amin'ny maha fanampiny fanampiny azy dia hivarotra solomaso fakan-tsary any aoriana tahaka ny DSLR i Samsung
Mba hamaranana ny baterinao, 3.000 mAh ary 3.600 mAh ho an'ny sisin'ny S7 sy S7 tsirairay avy, manantena izahay fa hanatanteraka ny iraka ampanaovina azy ireo izy ireo ary hanatsara ny zavatra hita ao amin'ny S6. Samy manolotra fanohanana famandrihana tsy misy tariby tsy misy tariby roa izy ireo.
Rafitra fandidiana Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow
efijery 5.1-inch QHD Super AMOLED (1440 x 2560) 5.5-inch QHD Super AMOLED (1440 x 2560)
Rom 32/64 GB miaraka amin'ny fanohanana microSD 32/64 GB miaraka amin'ny fanohanana micro SD
Fakan-tsary Rear MP 12 miaraka amina Dual Pixel / OIS F / 1.7 12 MP Dual Pixel OIS f / 1.7
Fakan-tsary aloha 5 MP f / 1.7 5MP f / 1.7
Endri-javatra fanampiny Fanoherana rano IP68 / famandrihana tsy misy tariby Fanoherana rano IP68 / famandrihana tsy misy tariby
lafiny X X 142.4 69.6 7.9 MG 150.9 x 72.6 mm
lanja Gramin'ny 152 Gramin'ny 157
Samy ho hita ho an'ny volana martsa ary mbola tsy fantatsika ny vidiny roa. Mistery hovahana ao anatin'ny andro vitsivitsy, toy ny tranga misy amin'ny LG's G5. Ireo izay mitahiry ny telefaona dia hahazo kinova Gear VR maimaimpoana avy any Samsung, ka manomboka anio dia afaka miditra amin'ny fividianana ity terminal ity ianao ho voalohany mandray azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia nanambara ny Galaxy S7 sy S7 Edge miaraka amin'ny fakan-tsary 'Dual Pixel', fampisehoana 'On On' ary micro micro SD